Iyo inofungidzirwa mitengo yeiyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus inosvinwa | IPhone nhau
Nhasi tiri Chitatu, Nyamavhuvhu 31, zvinoreva kuti tiri vhiki nemaawa mashoma pamberi penyaya huru iyo mavanoburitsa iyo iPhone 7, iPhone 7 Plus uye pamwe neApple Watch 2. Zvikanzi, tatoziva zvese zvese nezve mafoni matsva ayo Phill Schiller achazounza pachiitiko ichi, asi rumwe ruzivo rwakange rusipo: kuti vachadhura zvakadii. Zvakanaka, fungidziro dzakatoburitswa kare iPhone 7 mitengo kunyange hazvo, sekudonha kwese, isu tinofanirwa kuramba takakahadzika kudzamara ruzivo rwave pamutemo.
Ruzivo rwacho rwakaburitswa neimwe yakasarudzika firita yatinogona kuwana paTwitter ine zita rekushandisa @the_malignant. Iyo gakava, zvirinani izvo zvandinoziva, ndezvekuti OnLeaks, akanyanya kuburitsa nguva, akamupomera kanoverengeka kuburitsa ruzivo rwunofungidzirwa naSteve kuti rwakabiwa nekuda kwekusareva kwayakabva. Iyo Malignant yawana ruzivo rwemitengo iyi kubva Leleda, imwe yemakambani makuru akabatana neApple kuChina.
Mitengo uye mamodheru eiyo iPhone 7
Kana tikatarisa mitengo yegore rapfuura uye kunyangwe ichiri mari zhinji, tinogona kuona divi rakanaka: semuenzaniso, muna 2015 tanga tine iPhone 6s Plus 64GB pamutengo we € 969 uye gore rino tichava ne mhando mbiri yekugona pamutengo we € 925, € 44 shoma. Zviri pachena kuti isu tese taizoda kuti mutengo uve wakaderera, asi isu zvakare tinofanirwa kuona iro rakanaka divi.
Nezve mutsauko uripo pakati pemhando mbiri idzi, zvinotarisirwa kuti iyo Plus modhi ine 12 + 12Mpx mbiri kamera, nepo yakajairwa modhi ine yakagadziridzwa 12Mpx kamera ine OIS. Iyo RAM ichave zvakare yakakwira mune iyo Plus modhi, ichisvika 3GB nepo yakajairwa modhi ichichengeta iyo 2GB ye RAM iyo yazvino mamodheru atova nayo. Pakave nekutaura kuti iyo Plus modhi ichave zvakare neiyo Smart Connector, asi ichi chinhu chisina kujeka uye chatichazowana muvhiki chete.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Iyo inofungidzirwa mitengo yeiyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus inosvinwa
Iwo ma6s pamwe ne64gb ari € 969 uye kwete 945 sezvakaratidzwa mune iyo posvo. Shuwiro yakanakisa
Mhoroi, Parli87. Warevesa. Muchiitiko ichocho, kana mitengo ikasimbiswa, iyo yekuchengetedza ichave iri € 44 kunyangwe nekaviri kugona, mune iyo 64GB.
Kwazisai nekutenda ketsamba 😉
Zvinondipa, kuti nema modhi aya anoramba achienderera, Apple ichawira nechikwata chose, tichaona kana gore rinouya, pamwe nekufungidzirwa kwakakwana kwavachaita, vachasimuka pasi.
Hahahaha 44 euros chete, pachave nemumwe munhu anoitenga ... rino richava gore rekutengesa kwakanyanya uko Apple ichave nako mumakore mushure ma6s.
Handifunge kuti ruzivo urwu rwakanyatsojeka, sekuziva kwangu, shanduko yemitengo ye iPhone yagara ichiwedzera kubva musi wa5, saka zvingave zvisingawanzoitika kuti vadzikise mutengo kana vawedzera kugona yeiyo yekutanga iPhone kubva 16 kusvika 32GB
Jessica Alba ajoina iyo cast yezvizivikanwe zviso zvinozoonekwa paPlanet yeApplication